Tag: yakawedzera mavara kushambadzira | Martech Zone
Tag: yakawedzera mavara kushambadzira
Muvhuro, September 12, 2016 Chipiri, Gunyana 13, 2016 Tim Krozek
Google's yakawedzera mameseji kushambadza (ETAs) zviri pamutemo kurarama! Iyo nyowani, yakareba nhare-yekutanga shambadziro fomati iri kuburitsa kunze kune ese madhizaini padhuze neiyo iripo desktop-inowirirana standard ad fomati - asi chete kwenguva iripo. Kutanga Gumiguru 26, 2016, vashambadziri havachakwanise kugadzira kana kurodha zvakajairika zvinyorwa zveshambadziro. Pakupedzisira, kushambadzira uku kunozopera muzvinyorwa zveyakabhadharwa nhoroondo yekutsvaga uye kutsakatika kubva pane rako rekutsvaga peji peji zvachose. Google yakapa vashambadziri